बिहान उठ्नसाथ खाली पेटमा के नखाने ? के खाने ? – Milappost
बिहान उठ्नसाथ खाली पेटमा के नखाने ? के खाने ?
खानपान सम्बन्धी कतिपय सामान्य कुराहरुको हेक्का नहुँदा हामीले अनेकन स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपर्छ । जस्तो कति खानेकुरा यस्ता हुन्छन्, जसलाई आपसमा एकसाथ खाँदा त्यो विषाक्त बन्छ । त्यसैगरी कति खानेकुरा खाली पेटमा खानु उचित हुँदैन । खानपानका यी सामान्य ज्ञान भएमा कतिपय संभावित जटिलताबाट बच्न सकिन्छ ।दही स्वास्थ्यका लागि अत्यान्तै उपयोगी पेय हो । क्याल्सियम र प्रोटिनको भरपुर स्रोत हो यो । दहीले पाचन सम्बन्धी समस्या कम गर्न र शरीरमा उर्जा बनाइराख्न सहयोग गर्छ । गर्मीको याममा यसले शरीरलाई शितल बनाइराख्छ । तर, दही सेवनमा केही सर्त पालना गर्नु जरुरी छ । अक्सर दही रातको समयमा खानु हुँदैन । त्यसैगरी खाली पेट पनि दही खानु उचित हुँदैन । खाली पेटमा दहीको सेवनले शरीरमा एसिडिटीको स्तर बढ्नुका साथै चिसो लाग्न सक्छ ।